I-china Home Fitness Rally band band inayiloni inani eliphikisayo lokuzivocavoca intambo ezemidlalo trx ukusebenzisa Umkhiqizi nomhlinzeki | NQ
Ilungele ukuhamba nokusebenza ngaphakathi noma ngaphandle. Qinisa, bamba futhi uqophe umzimba wakho noma kuphi, nganoma yisiphi isikhathi ngemizuzu eyi-15 ngosuku.
Umqeqeshi we-ATPWAVE Suspension Trainer unesisindo esisodwa se-lb. Ungayisetha cishe noma kuphi ngaphansi komzuzu. Zivivinye noma kuphi ngohlelo lwakho.
Shisa amanoni, yakha imisipha emile: Ngokuzivocavoca okungu-300 +, imichilo yokumiswa izokunika imiphumela yomzimba ephelele, isize ukushisa amanoni angafuneki futhi yakhe umsipha - hhayi omkhulu - wemisipha.
Iyashesha, iyajabulisa, futhi iyasebenza, i-TRX yakha imisipha, ishise amanoni, inyuse ukuguquguquka, futhi ithuthukise ukukhuthazela. Le minyakazo eyisisekelo elula eyisikhombisa izokuqalisa ohambweni lwakho lokuqina. Ngokulungiswa kobude bezintambo zakho noma ukuma komzimba wakho, uzovula inani elingenamkhawulo lokuzivocavoca umzimba. Ngokuvamile, lapho isikhungo sakho samandla adonsela phansi sisondela phansi — noma lapho uqonde ngqo ngaphansi kwephiko — lapho umsebenzi uzoba nzima kakhulu.
Lo mkhiqizo ugezwa ngomshini emanzini abandayo. Beka iyunithi esikhwameni sayo semesh (kufakiwe) noma esikhwameni somcamelo ngaphambi kokuwasha ukugwema imichilo eboshwe. Qiniseka ukuthi imibhede yezinyawo ivikelekile ukuvikela ukulimala kwezintambo zenayiloni. I-Hang noma i-air dry kuphela.
50 × 35 × 30cm, 15pcs / ctn, 20KG, Intengo ingeye-Enhanced edition
Langaphambilini Ibhendi ye-TPE yoga yangokwezifiso, Ibhendi lokumelana neRubber Yokuzivocavoca, Ukuqina kokuzivocavoca kweLatex theraband yamahhala
Olandelayo: I-Outdoor CampMilitary Custom Sleeping Bag Duck Down 800g Gcwalisa isikhwama sokulala sabantu abadala
Ukumelana Namaqembu Okuzivocavoca
Ikhaya Workout Abaqeqeshi Ukuqina komzimba Muscle Rolle ...
wholesale imisipha ezemidlalo amagwebu nomqeqeshi siqu p ...
2021 izinga okusezingeni umsebenzi professional equipme ...
Isitolo esidayisa yonke impahla eshibhile ashintshekayo Spring Magn ...
Ikhwalithi ephezulu professional adjustable pv plastic ...